Malunga nathi - Qingdao Yi Xinyan International Trade Co., Ltd.
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava kwiibhere kunye negrisi
Shining Industry China, siye iinkampani ezintathu ukuze unikeze iinkonzo ezingcono.
Senza ukuthwala kunye negrisi kwimarike yasekhaya ngaphezulu kweminyaka engama-20.
Ukuzisa iimveliso ezisemgangathweni kwihlabathi liyinjongo yokulandela kwethu. Saseka inkampani yorhwebo yokuthumela ngaphandle iimveliso eziphambili kunye nokuzala eQingdao Port.
Qingdao YIXINYAN urhwebo lwamazwe aphesheya co., Ltd uphawu BXY, eyona mveliso iphambili kuthwala ibhloko yomqamelo, olunye uphawu ISIXHOSA, imveliso ephambili igrisi yokuthambisa.Qingdao QINGHENG ethwele co., Ltd uphawu QHW, Imveliso ephambili iibheringi zebhola kunye neebheringi zeebhola.Qingdao SENZEXIANG urhwebo lwamazwe aphesheya co., Ltd uphawu SZX , eyona mveliso iphambili yi-insulator.
Inkampani yethu icwangcise uphando kunye nophuhliso, uyilo, imveliso njengenye yeshishini lobuchwephesha, amandla obuchwephesha. Inkampani inezixhobo ezizodwa zokuqhubela phambili zokuvavanya, umatshini wokugaya we-CNC, ukuthwala okuphezulu okuphezulu kwiimveliso ngokuchaneka okuphezulu kwaye ubeke isiseko esiqinileyo.
Inkampani ibambelela kumgangatho weengcambu, iinjongo zeshishini ezijolise kumgangatho, uninzi lwabathengi abatsha nabadala ukubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni, iimveliso ezaziwayo ukwenza ishishini lokuthambisa kunye negrisi. Siyabamkela ngokunyanisekileyo oosomashishini basekhaya nabangaphandle ukuba baxoxe ngentsebenziswano kunye nophuhliso oluqhelekileyo.
Iimveliso zam zenkampani zithengisa ukuthandwa kumazwe angaphezu kwama-20, kubandakanya iYurophu, iMelika, iAfrika, uMzantsi mpuma Asia kunye namanye amazwe.
Ngoku iimveliso eziphambili zeefektri zinokuthi endaweni yokuchaneka okuphezulu, ukulayisha okunzima iibheringi zokuthumela ngaphandle. Umzi-mveliso wethu oseLiao Cheng City, wonke umgangatho wokuthwala ngokungqinelana nolawulo lweenkqubo zomgangatho we-ISO9001, enye yeenkampani eziphambili zorhwebo lwangaphandle. Ngoku sinokubonelela ngePillow Block Bearing, Deep Groove Ball Bearing, Spherical Roller Bearing, Tapered Roller Bearing, Cylindrical Roller Bearing, Thrust Ball Bearing kunye nezinye iimveliso kunye nokusetyenziswa. Uphawu lwentengiso olubhalisiweyo lwenkampani "BXY", "FXY", "QHW" "SKYN" ngokuyinxenye endaweni yemveliso ezingeniswa elizweni. Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi ngoomatshini abasebenza ngokuchanekileyo, amatye okusila, imayini yamalahle, ukuphakamisa, ioyile, amandla omoya, izithuthi, iphepha kunye namanye amashishini, bonke abathengi bam abatsha nabadala abanomdla kwiimveliso zethu.
Siphinde sijongane nalo lonke uhlobo lweshishini lokuthambisa iigrisi ezifana ne-calcium base grease, i-complex lithium base grease, igrisi ephezulu yokuthambisa igrisi njalo Lonke iqela lethu, ubambe iqela injineli yobungcali kunye namava osisityebi kuphuhliso iimveliso petrochemical, zama ukufumana oomatshini umgaqo ukukhuhlana ngoomatshini kunye nomsebenzi kuphuhliso, imveliso, ukuthengiswa kunye nenkonzo ukuthambisa ajikeleze iimveliso uthotho igrisi, ejolise ekunikezeleni abathengi iimveliso ukuthambisa ajikeleze kunye izisombululo zenkqubo kunye nokubonelela ngenkonzo kubathengi kumashishini angaphezu kwe-120 ukwenza izixhobo zabaxumi zingaphantsi kwempixano kwaye zithambise ngakumbi!
· Baninzi abathengisi bempahla eluhlaza kwimveliso yethu, sisebenzisana iminyaka emininzi.
Sikho ngokukodwa malunga nenjongo yokubambisana ngokuphumelela kabini, lukhetho lokuqala, ukulawula inzuzo esiyinyanzelayo kumgangatho, singumboneleli wakho othembekileyo, sigxininise kwinkonzo, lukhetho lokuqala lokuba uzimisele ukusebenzisana ixesha elide, Iqela lethu lineminqweno ephezulu
Asingobalingane bethu beshishini kuphela, siyakuxabisa ukudibana, ke sinoxanduva lokugcina ubudlelwane obuhle.Sigxininisa ukuba "Yenza ishishini elisemgangathweni, thethana ngexabiso eliguqukayo." Kude kube ngoku, ukulandela kwethu iinjongo kutsala uninzi lwamashishini anomdla ofanayo.